Iva Google search pro
Yakatumirwa ne Tranquillus | Juil 23, 2018 | hofisi
Tsvaga kutsvaga injini yakafanana neGoogle inoratidzika nyore. Zvisinei, vazhinji vashandisi havazivi kuti vanozviita sei uye havashandisi nguva dzose dzakagadzirwa zvinotsvaga injini yekuvandudza tsvakurudzo dzavo. Vanowanzotadza kuisa mutsetse kana mazwi makuru paGoogle, nepo zvichibvira kuwana mhinduro yakakosha mumiganhu yekutanga. Panzvimbo pokuwana mazana ezviuru kana kunyange mamiriyoni emigumisiro, unogona kuwana ruzivo rwakakosha URL ruchaita kuti zvive nyore kuwana user pasina kuparadza nguva. Kuti uve Google search pro pahofisi kunyanya kana uchifanira gadzirira mushumoHeano mamwe mazano ekufungisisa.
Kushandisa zvinyorwa zvinyorwa kuti uchenese kutsvaga kwako
Google inotarisa zviratidzo zvitsva kana vashandi vanogona kuchenesa kutsvaga kwayo. Izvi zvinoshandiswa zvinoshanda pane injini yekare, Google Images uye zvimwe zvakasiyana zvejini yekutsvaga. Pakati pevashandi vacho, tinocherechedza zvinyorwa zvinyorwa. Mutsara unotsanangurwa inzira yakanaka yekutsvaga mazwi chaiwo.
Nekudaro, mhedzisiro inowanikwa ichave iyo iine iwo chaiwo mazwi akaiswa mumakotesheni Maitiro aya anotendera iwe kutaipa kwete chete izwi rimwe kana maviri, asi zvakare chirevo chizere, semuenzaniso "kunyora kunyora mushumo wemusangano".
Pasina mazwi ane "-" chiratidzo
Kuwedzera dash pane dzimwe nguva kunodiwa kunyatsotsanangura imwechete kana maviri mazwi kubva pakutsvaga. Kuti tiite izvi, tinofananidza izwi kana mazwi kuti tibvumirwe kubva kune dash kana kudonhosa chiratidzo (-). Nokusabvisa shoko rimwe kubva pakutsvaga kwake, rimwe shoko rinoshandiswa mberi.
Kana iwe uchida kutsvaga mapeji ewebhu achitaura nezvemisangano yekupera-kwegore, semuenzaniso, ayo asingataure panguva imwechete nezve colloquia, ingo nyora "semisangano yekupera-kwegore - colloquium". Zvinowanzo kutsamwisa kutsvaga ruzivo uye kuwana zviuru zvemhedzisiro isina basa nekuda kwezita. Iyo dash nokudaro inodzivirira aya kesi.
Kuwedzera mazwi ne "+" kana "*"
Zvakare, iyo "+" chiratidzo chinokutendera iwe kuwedzera mazwi uye kupa huremu kune rimwe rawo. Ichi chiratidzo chinoita kuti zvikwanise kuwana mhedzisiro yakajairika kune akati wandei mazwi akasiyana. Zvakare, kana uchikahadzika nezvekutsvaga, kuwedzera asterisk (*) inokutendera kuti utsvage kwakasarudzika uye zadza zvisipo zvemubvunzo wako. Iyi nzira iri nyore uye inoshanda kana iwe usina chokwadi nezve chaiwo mazwi emubvunzo, uye unoshanda mune dzakawanda kesi.
Nekuwedzera iyo asterisk mushure mezwi, Google inozoshinga iro risipo uye kutsiva asterisk nayo. Izvi ndizvo zvinoitika kana iwe ukatsvaga "Romeo naJuliet", asi iwe wakanganwa izwi, zvinokwana kunyora "Romeo na *", Google ichatsiva asterisk naJuliet iyo ichaisa yakashinga.
Iko kushandiswa kwe "kana" uye "uye" uye
Imwe nzira inoshanda kwazvo yekuve pro muGoogle kutsvaga kutsvaga nekushandisa "kana" ("kana" muchiFrench). Uyu murairo unoshandiswa kutsvaga zvinhu zviviri pasina kusanganisa chero uye kana rimwe chete rematemu maviri anofanira kunge aripo mukutsvaga
Mutemo we "AND" wakaiswa pakati pematemu maviri ucharatidza nzvimbo dzese dzine imwechete yacho. SeGoogle pro pro, iwe unofanirwa kuziva kuti iyi mirairo inogona kusanganiswa kuitira kunyatsoita uye kukosha mukutsvaga, iyo isingasanganisi imwe.
Kuwana imwe faira yefaira
Kuti uzive maitiro ekutsvagisa Google kutsvaga kuti uwane nekukurumidza mhando yefaira, unofanirwa kushandisa rairo yekutsvaga "filetype". Muzviitiko zvakawanda, Google inopa mhedzisiro kubva kumatunhu epamusoro pakati pemhedzisiro yekutanga. Nekudaro, kana isu tichiziva chaizvo izvo zvatinoda, tinogona kusarudza kuratidza chete yakasarudzika mhando yefaira kuita kuti basa rive nyore. Kuti tiite izvi, isu tichaisa "filetype: mazwi akakosha uye mhando yemafomati akatsvaga".
Panyaya yekutsvaga faira rePDF pane kuratidzwa kwemusangano, isu tinotanga nekutaipa "musangano wekuratidzira filetype: pdf". Mukana nemurairo uyu ndewekuti hauratidze mawebhusaiti, asi zvinyorwa zvePDF chete pakutsvaga kwayo. Maitiro akafanana anogona kushandiswa kutsvaga rwiyo, pikicha kana vhidhiyo. Kune rwiyo semuenzaniso, unofanirwa kunyora "zita rerwiyo filetype: mp3".
Special Search by images
Kutsvaga nemufananidzo ibasa reGoogle iro risingazivikanwe kune vashandisi veInternet, asi rinonyanya kubatsira. Chikamu chakakosha chinowanikwa paGoogle kutsvaga mifananidzo, iyi Mifananidzo yeGoogle. Hausi mubvunzo pano wekupinza kiyi uye nekuwedzera "mufananidzo" ipapo, asi wekuisa pikicha kubva pakombuta yako kana piritsi kuti uone kana mifananidzo yakafanana inoonekwa paGoogle, kuenzanisa mifananidzo. mifananidzo nekutsvaga pa URL.
Iyo injini yekutsvaga icharatidza nzvimbo dziri nechomufananidzo mubvunzo uye icharatidzawo mifananidzo yakafanana yakawanikwa. Izvi zvinoshanda kuziva ruzivo, zvitubu zvemufananidzo, kufambidzana nemamwe kana zvishoma nezvakarurama kurongwa mumutsara uyu.
Pane nzira yekuwana ruzivo iwe rwaunoda pane saiti. Izvi zvinoita kuti zvikwanise kudzora kutsvaga kune imwe chete saiti. Uku kuvhiya kunogoneka nekutaipa "saiti: sitename". Nekuwedzera iro kiyi, isu tinowana zviri nyore ruzivo rwese rwakanangana nekiyi kiyi iripo pane ino saiti. Kushaikwa kwezwi rakakosha muchikumbiro kunoita kuti zvikwanise kuona ese akarongedzwa mapeji ewebsite iri mubvunzo.
Tongedza zviwanikwa zveGoogle zvitsva
Iwe unogona kuchinja zviwanikwa zvako paGoogle News kuti uone nyika-yega yega edition. Iwe unogona kuchinja shanduro yako nekuita shanduro yemutauro kuburikidza nehutano pazasi kwesoti. Iwe unogona kuita kuti Google News iratidze nekusarudza imwe yenzira dzingaita (imwe nguva-nguva, yemazuva ano, yakagadzikana uye yakasarudzwa), sarudza zvidzidzo nekuwedzera nyaya dzomunharaunda.
Iwe unogonawo kugadzirisa Google News zvinyorwa nekuratidza iwe unofarira uye zvishoma zvishoma nzvimbo dzepaIndaneti. Izvo zvinokwanisika kuti tive nemafungiro emitsva yekutsvaga. Sezvo imwe inonyorera kuti uve Google pro, unogona kugadzirisa mafayiri eSearchSearch kuti uone zvinhu zvepabonde kana zvinokuvadza.
Kuti mhanyisa tsvakurudzo pamusoro search engine, Activate Instant Search, chinja nhamba zvabuda por peji (kubvira 10 zvabuda por peji 50 kana 100 kunoguma mapeji), svinudzai kunoguma pahwindo itsva, kumisa zvimwe nzvimbo, shandura mutauro usingagumi, kana kusanganisira mitauro yakawanda. Nokugadzirisa mafungiro emitsva, unogonawo kugadzirisa geolocation nokusarudza guta kana nyika, kero, kadhi yepositi. Izvi zvinogadzirisa zvigumisiro uye zvinoratidza mapeji akakodzera zvikuru.
Wana rubatsiro kubva kune mamwe maGoogle mathuluzi
Google inopa maturusi akati wandei anobatsira kutsvagisa senge:
Tsanangura, mutereri anopa tsanangudzo yeshoko risina chidimbu chekuenda kuburikidza ne Wikipedia. Ingoridza " tsanangura: izwi kutsanangura Uye dudziro yacho inoratidzwa;
Cache ndiyo inofambisa iwe kuti uone peji sezvainochengetwa muGoogle cache. (cache: sitename);
Zvimwe zvinokubvumira kuwedzera URL mushure mokuraira kuti uone mapeji akafanana (zvine chekuita: google.fr kuti uwane dzimwe injini dzekutsvaga);
Allintext inobatsira kutsvaga izwi mumutumbi wepaiti nekusaisa musoro we peji (allintext: tsvaga izwi);
allinurl chinhu chinokubvumira kutsvaga URL dzemapeji ewebhu uye Inurl, intext, inokutendera iwe kutsvaga chirevo chakazara;
Allintitle and intitle bvumidza iwe kutsvaga mumisoro yemapeji ane iyo "zita" tag;
Bhizimisi inoshumira kutarisa nzira yekambani yematengo nekunyora masheya: zita rekambani kana kodhi yemugove wayo ;
Info chishandiso chinokutendera iwe kuti uwane ruzivo nezve saiti, kuwana iyo saiti cache, akafanana mapeji uye kumwe kutsvaga kutsva;
mamiriro okunze inoshandiswa kutsvaga mamiriro ekunze eguta kana dunhu (mamiriro ekunze: Paris inokutendera kuti uone mamiriro ekunze akaita muParis;
mepu inoratidza mepu yenzvimbo;
Inpostauthor ndiye anoshanda weGoogle Blog Search uye akazvitsaurira kutsvakurudza mukati memabloggi. Inobvumira kuwana bhuku re blog rakabudiswa nemunyori (inpostauthor: zita remunyori).
Inblogtitle yakachengetedzwawo kutsvaga mukati memabhulogi, asi inogadzirisa kutsvaga kubhengisa mazita. Inposttitle inogadzirisa kutsvaga kune zvinyorwa zvemashoko e blog.
Wana mamwe mashoko pamusoro pekutsvaga injini
Pane ruzivo rwakanyanya pahutaneti uye hazvisi nyore nguva dzose kuziva kuti ungawana sei. Kunyange zvakadaro Google search pro inonyatsoronga mhinduro inowirirana nekutsvaga kwayo uye kuwanikwa kwemasayiti ehurumende yakadai seGDP, kufa kwehuwandu, kutarisira upenyu, kushandiswa kwemauto. Zvinotoneka kuchinja Google kuva chekushandisa kana kuchinja.
Saka kuti uzive chigumisiro chekushanda kwemasvomhu, ingopinda mubasa iri mumutsva yekutsvaga uye utange kutsvaga. Injini yekutsvaga inotsigira kuwedzera, kubvisa, kupatsanurwa nekuwedzera. Maitiro akaoma anokwanisawo uye Google inobvumira kufungidzira masvomhu mabasa.
Vanoda kutendeutsa munhu chairema ukoshi akadai akurumidze, kure pakati mbiri pfungwa, mari, Google anotsigira zhinji hurongwa uye mari. Kutendeutsa daro rakadaro, anongoti kutaipa kukosha daro ichi (20 makiromita somuenzaniso) uye kuichinja mumwe chairema ukoshi (mu nemakiromita).
Kuti uzive nguva yenyika yekonferensi yevhidhiyo, semuenzaniso, ingo nyora mubvunzo + nguva + zita renyika kana maguta makuru enyika ino. Saizvozvowo, kuti uzive nendege dzinowanikwa pakati pendege mbiri, unofanirwa kushandisa rairo ye "ndege" yekupinda mumaguta ekuenda / ekuenda. Iwo "wekubhururuka" unoratidza makambani akaratidzwa kunhandare yendege, marongero enzendo dzakasiyana siyana, nendege kuenda nekudzoka.
Nhanho yakanaka .........
Iva Google search pro May 11th, 2020Tranquillus
pashureKubhadhara mari yako yekudzidzisa, mazano anobatsira
zvinoteveraNzira yekunyora mushumo unoshanda sei?